ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि महाशाखाले के-के गरिरहेको छ? :: Setopati
ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि महाशाखाले के-के गरिरहेको छ?
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, चैत २४
पछिल्ला केही वर्षदेखि काठमाडौं सडकमा सवारी साधनको चाप बढ्दो छ। दशक अघिको परिदृश्य हेर्ने हो भने बाटोमा धेरै महँगा गाडी पनि थिएनन्। अहिले विभिन्न नयाँ मोडलका महँगा सवारी भित्रिन थालेका छन्।
यतिबेला काठमाडौंमा मात्र झन्डै १६ लाख गाडी गुड्ने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक, एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार पाँच वर्षअघि काठमाडौंमा यसको आधा पनि सवारी साधन थिएनन्।
'अहिले काठमाडौंका सडकमा झन्डै १६ लाख गाडी गुड्छन्। नयाँ र महँगा गाडी देखिन थालेका छन्,' एसपी अधिकारीले भने, 'त्यसैले सडक विस्तार हुँदा पनि ट्राफिक समस्या उत्तिकै देखिन्छ।'
ट्राफिक र सेवाग्राहीलाई सहज बनाउन महानगरले विभिन्न ठाउँमा बाटो विस्तार गरिरहेकै छ। तर अहिलेको गाडी चापलाई पर्याप्त नभएको एसपी अधिकारीको भनाइ हो।
महाशाखाले व्यवस्थापन गर्न सडकमा ट्राफिक प्रहरी साथै ट्राफिक स्वयंसेवक संख्या थपेका छन्। हामीले सडकका विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीदेखि अन्य क्षेत्रका मान्छेसम्मलाई स्वयंसेवकका रूपमा खटेको देखिरहेका छौं।
त्यस्तै केही समयदेखि हामीले सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि राखिएका 'डमी' पनि देखेका छौं।
पहिलेको तुलनामा सडक कारबाहीमा पनि कडाइ भएको एसपी अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार महाशाखाले औसतमा दैनिक २५ सयदेखि ३ हजारसम्म सवारीलाई कारबाही गरेका छन्। शनिबार र सार्वजनिक बिदाका दिन भने यो संख्या कम हुन्छ।
सडकमा सवारी प्रवाह नियन्त्रण गर्न महाशाखाले विभिन्न काममा प्रायोजन हुने गाडी चल्ने तालिका बनाएको छ।
ठूला मालवहाक साधन जस्तै, टिपर र ट्रक बेलुका ९ बजेपछि मात्रै काठमाडौं प्रवेश गर्न पाउँछन्। र, बिहान ४ बजेभित्र उपत्यका बाहिर फर्केको हुनुपर्छ।
सडकमा हामी दुई पांग्रेमा पनि थुप्रो सामान ओसारपसार गरेको देख्छौं। यसरी हिँड्नेलाई ट्राफिकले कारबाही गर्दैछ।
यस विषयमा एसपी अधिकारी भन्छन्, 'त्यसरी सामान बोकेर हिँड्ने चालकलाई अवस्था हेरी कारबाही गर्छौं। किनभने दुई पांग्रे टन्न सामान बोक्न बनेका होइनन्।'
एसपी अधिकारीका अनुसार कतिपय अवस्थामा भने कारबाही गर्नु व्यावहारिक नहुनाले चालकलाई सम्झाइ-बुझाइ गरिन्छ, 'जुन प्रयोगको लागि सवारी बनाइएका हुन् त्यही कामका लागि मात्र चलाउनुपर्छ। सवारीमा सिट क्षमताभन्दा बढी राख्ने साधनलाई पनि कडाइका साथ कारबाही गरिरहेका छौं।'
सडक सुरक्षा र व्यवस्थाको जिम्मेवार सवारी चालक मात्र हुँदैनन्। कतिपय समय पैदलयात्रीको गल्ती र लापरबाहीका कारण दुर्घटना हुन्छ। नागरिकमा आधारभूत ज्ञान हुँदाहुँदै धेरैजसो दुर्घटना लापरबाहीकै कारण हुने एसपी अधिकारीको भनाइ छ।
यसरी विभिन्न कसुरमा कारबाहीमा परेकाबाट ट्राफिक महाशाखाले औसतमा मासिक तीन करोड २५ लाख रूपैयाँ सम्म राजश्व उठाइरहेको छ।
'सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट दायित्व पूरा गर्ने हो भने दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ। सडक सुरक्षाका लागि हरेक नागरिक उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन्,' एसपी अधिकारी भन्छन्, 'हामी ट्राफिकको हतियार सिठ्ठी मात्र हो। नगर र यहाँका सेवाग्राहीले मद्दत गरे ट्राफिक व्यवस्थित हुने हो।'
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २४, २०७७, १०:४६:१९
सुजुकीको दसैं अफर, हरेक पन्ध्र दिनमा एक जनालाई इन्ट्रुडर बाइक